ch 15 ယောဟန်သည် – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / ယောဟန်၏ဧဝံဂေလိတရားကို / ch 15 ယောဟန်သည်
15:1 "ငါသည်မှန်သောစပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏, ငါ့ခမည်းတော်သည်လည်းဥယြာဉျစောငျ့ဖြစ်ပါသည်.
15:2 အသီးမသီးသောအကျွန်ုပ်အတွင်း၌တိုင်းကိုဌာနခှဲ, သူကယူသှားလိမျ့မညျ. အသီးကိုသီးတတ်ကြောင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတဦးတည်း, သူကင်းစင်စေမည်, ပိုပြီးအသီးဘွားအံ့သောငှါဒါ.
15:3 သငျသညျယခုရှင်းလင်းလျက်ရှိ, ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအမှနျပြောပြီသောစကားလုံးများ၏.
15:4 ငါ၌တည်, သင်တို့ကိုငါအတွက်. ဌာနခွဲအလိုလိုအသီးကိုသီးနိုင်မဟုတျပါဘူးသကဲ့သို့, ဒါကြောင့်စပျစ်နွယ်ပင်၌တည်၏မဟုတ်လျှင်, ထိုနည်းတူသင်သည်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း, သငျသညျငါ၌တည်မဟုတ်လျှင်.
15:5 ငါသည်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏; သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏. အကြင်သူသည်ငါ၌တည်၏, ငါကိုယ်တော်၌, ဝံအများကြီးအသီး. ငါ့ကိုမရှိဘဲ, သင်တို့သည်အလျှင်းမပြုကြရန်တတ်နိုင်ကြသည်.
15:6 မည်သူမဆိုငါ၌တည်မပါဘူးဆိုရင်, သူကပစ်ပယ်ကြလိမ့်မည်, အခက်ကဲ့သို့, သူညှိုးနွမ်းပါလိမ့်မယ်, သူတို့သညျကိုစုသိမ်းခြင်းနှင့်မီးထဲသို့သူ့ကိုချမည်, သူလောင်ကျွမ်း.
15:7 သငျသညျငါ၌တည်နေလျှင်, ငါ့စကားသည်သင်၌တည်, ပြီးနောက်သင်သမျှကိုသင်လိမ့်မည်ကိုမေးမွနျးစခွေငျးငှါ, ထိုသို့သင်တို့အဘို့ပြုရမည်.
15:8 ဤသည်၌, ငါ့ခမည်းတော်ဘုန်းဖြစ်ပါသည်: သငျသညျအလွန်အသီးဘွားနှင့်ငါ့တပည့်ဖြစ်လာသင့်ကြောင်း.
15:9 ခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုချစ်တော်မူသည့်အတိုင်း, ဒါကြောင့်ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်. ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌တည်နေကြလော့.
15:10 သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဥပဒသေစောင့်ရှောက်လျှင်, သငျသညျငါ့မေတ္တာ၌တည်ရကြလိမ့်မည်, ငါသည်လည်းငါ့အဘ၏ဥပဒသေမြားကိုစောင့်ရှောက်ပြီငါသည်သူ၏မေတ္တာ၌တည်နေမယ့်အဖြစ်.
15:11 ဤအရာများကိုသင်တို့အားငါပြောပြီ, ငါဝမ်းမြောက်စရာသင်တို့၌လည်းရှိစေခြင်းငှါဒါ, နှင့်သင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမပြည့်စုံစေခြင်းငှါ.
15:12 ဤသူကားငါ၏ပညတ်သည်: သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်း, ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်သကဲ့သို့.
15:13 အဘယ်သူမျှမကဤထက်ကြီးမြတ်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိပါတယ်: သူသည်မိမိအဆွေတို့အဘို့မိမိအသကျကိုစှနျ့ကြောင်း.
15:14 သငျသညျငါ၏အဆွေဖြစ်ကြ၏, သင်တို့သည်ငါသွန်သင်အဘယ်သို့ပြုလျှင်.
15:15 ငါမရှိတော့သငျသညျအစေခံကျွန်မခေါ်ပါလိမ့်မယ်, ထိုကျွန်သည်မိမိသခင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမသိရပါဘူးများအတွက်. သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့မိတ်ဆွေတွေခေါ်ပြီ, ပြုလေသမျှတို့၌အရာအားလုံးငါသည်ငါ့ခမည်းတော်ထံမှကြားရကြပြီကွောငျ့, ငါသည်သင်တို့သိစေပြီ.
15:16 သငျသညျအကြှနျုပျကိုရှေးခယျြထားကြပြီမဟုတ်, ဒါပေမဲ့ငါသည်သင်တို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့ကြ. ထိုအခါငါသည်သင်တို့ကိုခနျ့အပျခဲ့ကြ, သငျသညျထှကျမသှားနဲ့အသီးကိုသီးစေခြင်းငှါဒါ, ဒါသင်၏အသီးအကြာရှည်စေခြင်းငှါ. ထိုအခါသမြှသညျအကြှနျုပျနာမကိုအမှီခမည်းတော်၏ဟုမေးကြပြီ, သူသည်သင်တို့အားပေးရမည်.
15:17 ဤသည်သင်တို့ကိုငါမှာထား၏: သင်တို့သည်အချင်းချင်းချစ်စေခြင်း.
15:19 If you had been of the world, the world would love what is its own. သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, you are not of the world, but I have chosen you out of the world; ဒီအတွက်ကြောင့်, the world hates you.